Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọrụ nnapụta Lufthansa maka Afghanistan na -aga n'ihu
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Lufthansa efefela ndị gbara ọsọ ndụ Afghanistan 1,500 na Germany n'enweghị nsogbu
Lufthansa ga -aga n'ihu na -arụ ụgbọ elu ndị ọzọ site na Tashkent na ụbọchị na -abịanụ na nhazi na Ọfịs Ofesi nke German.
Kemgbe otu izu, ejirila ụgbọ elu iri na abụọ si Tashkent buga Germany.
Ndị otu Lufthansa na -elekọta ndị na -achọ nchekwa mgbe ha bịarutere.
A ga -eme atụmatụ ụgbọ elu ndị ọzọ n'ụbọchị ndị na -abịanụ.
N'ime izu gara aga, Lufthansa na -ahazi ụgbọ elu iji buga ndị gbara ọsọ ndụ na steeti Central Eshia gaa Germany. A na-eji ụgbọ elu ogologo ụgbọ elu Airbus 340 mee ihe na nke ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ elu ụgbọ elu kwa ụbọchị ebutela Frankfurt ngụkọta nke ihe karịrị mmadụ 1,500.
Mgbe ha rutere na Frankfurt, otu ndị na -akwado Lufthansa na -enyere ndị bịara ọhụrụ aka nri, ihe ọ drinksụ drinksụ na uwe, na -enyekwa nlekọta ahụike na akparamaagwa mbụ. Maka ọtụtụ ụmụaka na -abata ugbu a na Frankfurt, etinyerela ebe egwuregwu na ihe eserese ma nyekwa ihe egwuregwu.
Gọọmentị German butere Lufthansa ka ọ nyere aka n'ịwepụ ndị gbara ọsọ ndụ Afghanistan na ụgbọ elu Airbus A340 nke ọ kwụrụ. Ụgbọ elu ụgbọ elu nke German anaghị efe efe na Afghanistan kama na -anakọta ndị mmadụ site na Bundeswehr (ndị agha German) wepụrụ na Doha, Qatar na Tashkent, Uzbekistan.